JECHOOTA GAMNA OROMOO KUTAA 5ffaa -
JECHOOTA GAMNA OROMOO KUTAA 5ffaa
Gamni gamnatti bayee qore!!!!
1ffaa:-jalqabarratti; dursi duraa, gamin gamna caalu:-
Namni haasawa jabaa dubbate, nama haasawa jabaa of wajjiin dubbate; gorsaan jabaan nama gorsa jabaa of gorse; barsiisaan jabaan nama waan jabaa of barsiise; qajeelchaan jabaan nama of qajeelche!!
2ffaa fi itti aansoo garuu:-
Beekaan ka waa barsiisuu wallaalaan waan waa barataati; beekaan ka waa qajeelchuu wallaalaan waan qajeelfamaati; beekaan fagottuu waa argaa wallaalaan waan ofuu argineeti; beekaan waan boruutuu beekaa wallaalaan waanhardhaa hin beeku; beekaan waa hubataa wallaalaan hin hubatu; beekaan waa qoraa wallaalaan hin qoru; beekaan waa madaalaa wallaalaan hin madaalu! Jedhee gamin duraa isa lammataa dubbiin mooye!!
Previous ‪#‎OromoProtests‬ happening now in Bishoftu Secondary School, East Shawa April 1, 2016
Next Oromo Prisoners Benefit Concert